प्रमोशनका लागी अमेरिकाबाट नुतन, ‘रंग बैजनी’ ले जित्ला त दर्शकको मन ? « Mazzako Online
प्रमोशनका लागी अमेरिकाबाट नुतन, ‘रंग बैजनी’ ले जित्ला त दर्शकको मन ?
आफुले निर्माण गरेको चलचित्र ‘रंग बैजनी’ को प्रमोशनका लागी निर्मात्री, अभिनेत्री तथा स्क्रिप्ट राइटर नुतन प्रधान काठमाण्डौं आइपुगेकी छिन् । मंसिर १९ देखि प्रदशर्नमा आउने लागेको यो फिल्मको प्रमोशनका लागी उनी अमेरिकाबाट नेपाल आएकी हुन् ।
निर्देशक शम्भु प्रधानकी श्रीमती समेत रहेकी नुतनले ‘रंग बैजनी’ को कथा तथा पटकथा लेखेकी हुन् । नुतन अभिनेत्री समेत हुन् जसले ‘सुनचाँदी’ र ‘नक्कली सक्कली’ जसले एकसमयका हिट चलचित्रहरुमा अभिनय समेत गरेकी थिइन् । काठमाण्डौ आएकी नुतनले अब ‘रंगबैजनी’ को ब्यापक प्रचारप्रसारका लागी समय दिने संचारकर्मीहरुलाई बताएकी छिन् ।
शम्भुद्वारा निर्देशित ‘रंग बैजनि’ मा गरिमा पन्त, सुमिना घिमिरे र दिक्पाल कार्कीको मुख्य अभिनय रहेको छ । चलचित्रलाई शम्भुका छोरा शशांक प्रधाने खिचेका हुन् । मित्र गुरुङको सम्पादन र दीपप्रधानको संगीत रहेको यो चलचित्र अहिले दर्शकमाझ प्रतिक्षित रहेको छ । १२ वर्षपछि निर्देशनमा फर्किएका शम्भुले निर्देशन गरेको यो चलचित्रले दर्शकको मन जित्ने हो कि होइन् ? त्यो त मंसिर १९ पछि थाहा हुने नै छ ।